Olee otú Iji Zụlite Travel Dị A Nomad Site Europe | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Njem Europe > Olee otú Iji Zụlite Travel Dị A Nomad Site Europe
Njem ụgbọ oloko, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ Ndụmọdụ, Njem Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 22/10/2021)
Ọ bụrụ na ị na-a solo njem na-amasị gị na-azụ njem dị ka a nomad, mgbe ahụ ị na-na na na-nri ebe. Train-ejegharị ejegharị bụ onye nke kasị mma ụzọ njem site Europe ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-enweta ihe niile na Europe nwere na-enye. Ọ ga-abụ n'obodo, ma ọ bụ pụtara eke Okirikiri ị pụrụ ịnụ ụtọ ya niile site na ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè.
Ihe bụ ihe ọzọ, ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè dị ka a nomad nwere a ọtụtụ ndị ọzọ uru. Ị na-na-enweta ihe niile dị gị oge, na ụgbọ oloko na-enye gị ohere ime ya were were na enweghị ihe ọ bụla hassles. Ọ pụrụ ịbụ onye na-adịghị mgbe ụfọdụ, ma e nweghị nchegbu na a mode nke njem, ebe ụgbọ elu bụ ihe kpamkpam dị iche iche ihe. Ọ bụrụ na ị na-eji ụgbọ elu eme njem, n'ebe ahụ bụ mgbe niile nchegbu nke mmadụ karịrị akarị ọdụ ụgbọelu na overzealous nchebe. Ihe bụ ihe ọzọ, n'ebe ụfọdụ dị, ị ga-esi gị ebe ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị na-a ụgbọ okporo ígwè!
N'ihi na ndị a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè na gị okwu bụ ihe kasị mma ị pụrụ ime. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-amalite a kpokọtara na-awagharị awagharị na njem, isiokwu a ga-enyere gị site n'inye gị ndụmọdụ na Atụmatụ na otú ime ya nke ọma.
Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Chekwa ụgbọ oloko, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
Main Ihe Tụlee Mgbe Ị Chọrọ Zụlite Travel ka a Nomad
Tupu ị na-amalite gị Train Travel ka a Nomad njem, ị ga-enwe uche na-eme ya, na ị ga-enwe ego.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ a ejegharị ụgbọ okporo ígwè njem, ị ga-enwe nsogbu ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ dị ka a freelancer ma ọ bụ si n'ụlọ gị. Ọ bụla na-arụ ọrụ na ị nwere ike ime na gị na laptọọpụ, ị pụrụ ime ya na ihe ọ bụla ọnọdụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ezumike site na ọrụ ruo na ezumike, ị ga-mkpa na-eji ego gị na-eji amamihe. The ihe ọma bụ na e nwere ụfọdụ ihe ngwọta na-enyere.
Mara na ọ bụrụ na njem ụgbọ okporo ígwè maka 30days ma ọ bụ karịa họrọ Interrail uwa ngafe. Ma Single tiketi na-enye gị ohere ịga gafee ọtụtụ nke Europe na gị mma, eme ka ọ na a nomad nrọ. Ị ga-esi na-aga mgbe na ebe ị chọrọ, na nke ahụ bụ ụzọ kasị mma ike a pụrụ iche na-ejegharị ejegharị na ahụmahụ.
Ihe ọ bụla ị na-ahọrọ maka ụgbọ oloko gị njem, you can still zọpụta ego n'ụzọ dị otú a.
Etu esi echekwa ego mgbe ị zụlitere njem dịka onye na-aga agha
The ihe ọma banyere ụdị ahụmahụ bụ na ị ga-apụtụghị emefu ego. site na nke a, anyị pụtara na mgbe ị na-azụ njem dị ka a nomad, ị ga-esi kacha mma ahụmahụ ma ọ bụrụ na ị na-anọ na ọnụ ala gọọmenti rụrụ, esi nri gị nri, na ndị ọzọ.
Chọrọ ịbanye n'ihi na nke a mode nke njem ga-azọpụta gị ego.
Kasị ego nọrọ mgbe Train Travel ka a Nomad-aga ụlọ ntinye akwụkwọ. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị akwụkwọ gọọmenti rụrụ, ị nwere ike ịzọpụta a otutu ego dị ka ha na-na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọnụ karịa hotels ma na-enye a mma ma ndị ọzọ ahụmahụ kwesịrị ncheta. Ihe bụ ihe ọzọ, mgbe ị na-eme njem naanị, ị nwere ike n'akwụkwọ bụla n'ime ụlọ na-dị ka ọtụtụ ndị na-na na ọ, nke bụ ọnụ ala nhọrọ. Na-atụkwasị anyị obi, ị ga-achọ nke a n’ihi na nke a ga-enye gị ohere iso ndị njem ndị ọzọ nwere ụdị obi a na-emekọrịta ihe.
N'akụkụ aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị chọrọ izute obodo, i kwesịrị iji Ịkwọ ụgbọ mmiri, n'ihi na otú a ị ga-esi na-anọ na obodo. gbakwunyere, ha nwere ike ịgwa gị ihe banyere obodo ha ma na-egosi na ị na niile fun ebe uru ịga.
The ọzọ ihe na-eri efep ke gị ego bụ, ọma, eri. Ị nwere ike ịzọpụta ego na nri site na-akwadebe gị nri na mbikọ ma ọ bụ ụlọ. Ọtụtụ ụlọ oriri na ọelsụ andụ na ụlọ na-enye kichin ị nwere ike iji n'efu. Ihe bụ ihe ọzọ, mbikọ ọzọ ohere bụ fechapụta na ndị mmadụ na-akwadebe ụfọdụ nri ịkọrọ.
Train Travel bụ Nomad Atụmatụ
Ọ bụrụ na ị na-na na Train Travel ka a Nomad ụdị ekwurekwu, na-anọ na gọọmenti rụrụ bụ ihe ị ga-akpọ isiala nye dị ka ọ bụ n'ihi na ndị mmadụ dị ka gị.
Ọ bụrụ na ị na-na na Train Travel ka a Nomad ụdị onye na-anoro onwe ya, ị ga-etinye na a obere mgbalị ma ọ bụrụ na ị chọrọ fechapụta na ndị ọzọ. The ihe ọma bụ na mgbe ụbọchị ole na ole, ị ga-eji ya. N'ikpeazụ, ị ga-n'anya ụzọ ị ga-esi fechapụta na ndị ọzọ mgbe ha na-a nomad njem.
Ị adịghị nwere iji ndina Farisii na-anọ na obodo; ị nwekwara ike iji ya na-fechapụta ha. The ngwa nwere ike ji mee ka meetups na obodo na-n'anya na-ewere mba ọzọ na a n'abalị si.
Kpachara Anya Maka na pickpockets! Dị ka ọ dị na obodo ọ bụla ọzọ na ụwa, European obodo nwere pickpockets na ndị omempụ ndị ọzọ na-agbalị iji ohere nke njem nleta. Ị kwesịrị ịkpachara anya, na ị ga-agụ banyere n'akpa a zụrụ azụ ọnọdụ n'ihi na ebe ị na-eleta. Always eme nnyocha online tupu eleta a obodo.
Always iji ngwa na pụrụ ime ka gị nomad ejegharị ejegharị ndụ ọzọ mfe. Soro gị expenses, ọtụtụ n'ime ngwa ọdịnala nwere ike ịbụ gị kasị mma enyi.
Cheta njem ìhè. Ọ bụrụ na ị na-aga na-a ụgbọ okporo ígwè eme njem nomad, ị ga-enwe ihe mfe oge naanị ebu ihe dị mkpa. Gọọmenti rụrụ na-enye ọtụtụ nke dị oké mkpa eji enyere ndụ aka dị ka akwa nhicha, ndị na-ehicha ntutu, na ihe ndị yiri ya, ya mere na ị na-adịghị na-eme ka gị. gbakwunyere, ha na-emekarị nwere saa igwe na dryers na i nwere ike iji maka a euro ma ọ bụ abụọ, otú ị na-adịghị na-ọtụtụ uwe na ị ma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga na a otutu stof, backpacking pụrụ ịbụ a mma.
Na mkpokọta, ụgbọ okporo ígwè eme njem dị ka a nomad bụ a mara mma ma na hassle-free ahụmahụ. Ị nwere ike ịga ọtụtụ ebe mfe niile gafee mara mma mba ndị dị ka France, Germany, Ịtali, na ndị ọzọ. gbakwunyere, ị ga-esi na-ahụ mara mma obodo na pụtara Okirikiri uwa nwere na-enye. Ọ dịghị ndị ọzọ njem nhọrọ ga-enye gị ihe dị otú ahụ agaghị echefu echefu na fun ahụmahụ.
Mee ihe ndị magburu onwe Train Travel ka a Nomad plan tupu na Zụrụ The Train Tickets Ị Mkpa, na ị ga na-setịpụrụ na-amalite gị njem!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-nomad-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#njem njem	njem Europe	Europe njem	Atụmatụ	njem ụgbọ oloko	Tranride	ụgbọ oloko	traintip	ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ	Train Travel	ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ	ụgbọ okporo ígwè njem	Njem	njem nlegharị anya
Njem ụgbọ oloko, Ụgbọ okporo ígwè njem Austria, Zụlite njem Britain, Ụgbọ oloko njem France, Ụgbọ okporo ígwè njem Hungary, Inzọ Njem Italytali
Njem ụgbọ oloko, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Italytali, Ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland, Zụọnụ Ndụmọdụ, Ụgbọ oloko njem UK, Njem Europe
Njem ụgbọ oloko, Zụọnụ njem Czech Republic, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Ụgbọ okporo ígwè njem Hungary, Inzọ Njem Italytali, Ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland, Njem Europe